Akụkọ - Mmemme ụlọ ọrụ, usoro ikpo okwu-Jingwei Chemical Fiber ga-ezute gị na 2021 Shanghai Textile Machinery Exhibition
Industry omume, mgbanwe n'elu ikpo okwu-Jingwei Chemical Fiber ga-ezute gị na 2021 Shanghai Textile Machinery Ngosi
Ọrịa ahụ metụtara ọrịa ahụ, ihe ngosipụta nke ihe eji eji ngwa ngwa eji eme ihe Shanghai agaala kemgbe ihe karịrị afọ abụọ. Teknụzụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, akụrụngwa ọhụrụ na usoro dị iche iche dị mkpa iji gosipụta ya n'ahịa ma nweta nzaghachi ahịa; n'otu oge, mgbe mmetụta nke ọrịa ahụ, enwere nnukwu ọdịiche ahịa na nchekwa ogologo oge. Ọchịchọ maka ebe a na-achọ ịmalite. The China International Textile Machinery Ngosi na ITMA Asia ngosi, nke a ga-enwe na Shanghai Hongqiao National Convention na ngosi Center si June 12 ka 16, bụ ndị na-akpali akpali karịsịa. Gịnị bụ ihe ndị pụtara ìhè nke Suzhou Jinwei Chemical Fiber Equipment Co., Ltd.?
Kpamkpam arụmọrụ akpaaka + IoT akara usoro ngwọta
Ọganihu nke teknụzụ ọhụrụ na-aga n'ihu na nchịkọta nke okpueze ọhụrụ ahụ, yana mmepe dị elu nke ụlọ ọrụ textile na nkwalite ụlọ ọrụ mmepụta ihe, etinyela ihe ọhụrụ maka ngwa dị egwu. Suzhou Jinwei Chemical Fiber Equipment Co., Ltd. site na nguzobe na omume nke ụlọ ọrụ dijitalụ, jikọtara na 5G + ọgụgụ isi, data buru ibu na igwe ojii kọmpụta teknụzụ, gburugburu mmezu nke njikwa akpaaka metụtara ọgụgụ isi, ngwanrọ sistemụ njikọ, ozi na teknụzụ ndị ọzọ akwa igwe na akwa akwa teknụzụ Mechie njikọta ma nye ọtụtụ ọnọdụ mpaghara iji nyere aka na-aga n’ihu na-aga n’ihu nke asọmpi nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ.
Polyester / naịlọn / mejupụtara POY spinning zuru ezu usoro akụrụngwa
Akụrụngwa ahụ na-ekpuchi ihe karịrị usoro 20 dị iche iche dị ka igwe na-agbagharị, ndị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ndị na-ekpo ọkụ, wdg, ma ndị ọrụ nọ n'ụlọ na mba ndị ọzọ amatala nke ọma. Akụrụngwa akụrụngwa nwere njirimara nke nhazi bara ụba, arụmọrụ ngwaahịa kwụsiri ike, ọrụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, arụmọrụ dị elu na nchekwa ike, yana nchedo gburugburu ebe obibi;
1) typedị bimetallic ọhụrụ, gbọmgbọm, na ụdị ọkpọkọ pụrụ iche.
2) Igbe nchekwa ike, nke nwere ihe mgbakwasị ụkwụ dị elu na-ejide onwe ya.
3) Igwe mgbapụta na-agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agbaala agba agbaededeede, Pịịịlị mmanụ a na - agba mmiri n’igwe dị iche iche.
4) A usoro nke jụrụ usoro na edo na mụ ikuku mgbanwe na n'akụkụ ikuku ịfụ.
5) Enwere ike ibuli ma wedata efere ntuziaka, ma ọrụ ibuli isi dị mma.
6) High-speed akpaka ịmafe winder na nkenke asọfe, elu ịmafe ọma ọnụego, magburu onwe silk achicha akpụ, na ezi unwinding arụmọrụ. Weta nhọrọ ndị ọzọ na uru dị mma nye ndị ọrụ.
Lekwasị anya na ngalaba ndị tozuru etozu na oge ọrịa na-efe efe
Mgbe okpueze oria ohuru ohuru, mmata ndị mmadụ banyere nchedo ahụike abawanyela, na akwa na teknụzụ antibacterial, antiviral, ọtọ na egwuregwu ga-eweta usoro uto dị elu. Ọchịchọ maka ngwaahịa ọgwụ na-efe efe dị ka nkpuchi na akwa mkpuchi na-arị elu. Ọtụtụ ụdị mba amalitela ngwaahịa nwere echiche mgbochi ọrịa. Suzhou Jinwei Chemical Fiber Equipment Co., Ltd. nwekwara n'oge wetara ngwaahịa upgrades na kachasị spunbond na-abụghị kpara mmepụta edoghi na ọgwụ na ahụ ike na ịdị ọcha ubi.
Ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi, "merie" iji jikọọ n'ọdịnihu
Ngosipụta nke ngwaahịa ọhụrụ bụ isiokwu dị mkpa nke ngosi ọ bụla. Ndị ọgbọ na ụlọ ọrụ na-enwe ọganihu na mpi na-adigide mmepe na ọhụrụ. Jinwei ndị mgbe niile nọgidere na-a umeala n'obi àgwà na raara onwe ya nye na ọkachamara mmụọ, na a na-agba mbọ nọgidere pushing kasị kwesịrị ekwesị chemical eriri zuru ezu tent nke akụrụngwa maka ọrụ na ụwa, na n'otu oge ahụ na-eje ozi ahịa Mepụta ihe kwukwara uru na-enye ọrụ na ahụmahụ kasịnụ. Site na ntinye ohuru ohuru, imeputa teknụzụ, njikwa ihe okike, na mmegharị ọdịbendị, ụlọ ọrụ nwere ike mechaa bụrụ ụlọ ọrụ kachasị na ụlọ ọrụ ahụ.
Post oge: Jun-01-2021
Pee Pp Osisi-Plastic Ft Extrusion, Pc oghere mpempe akwụkwọ, Pc Mpempe akwụkwọ, Vkwanyere Multi Layer Okpomọkụ mkpuchi Corrugated Board, N'èzí Ngwa, Vkwanyere Corrugated Board,